ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: February 2015
ဒီနေ့ … ကိုယ်လဲအေး သူ(customer)လဲအေး မည်သည့် email မျှ မလာ။ လုပ်လိုက်စတွေ လည်း မရှိ။ အေးအေးဆေးဆေး အလုပ်တွင်နှပ်နေလိုက်ရုံသာရှိသည်။ အားနေတော့ လက်က Browser ပေါ်မှာ အလိုလိုရိုက်လိုက်မိပြီးသား www.facebook.com. တစ်ကယ်တော့ စာရေးချင်နေတာ။ ဒါပေမယ့် ဘာရေးလို့ ရေးရမှန်းမသိ။ ဘာခံစားချက်မျှ မရှိ။ အကြောင်းအရာလည်းမရှိ။ စာရေးဖို့လက်လျှော့ရင်း facebook ပေါ်ကူးလာမိခြင်းဖြစ်သည်။
စစချင်းတွေ့လိုက်ရသည်က ရုံးက အစ်မကြီး မနေ့က သူပြောတော့ နေမကောင်းလို့ ခွင့်ယူတာတဲ့ ခုကျ back date နှင့်တက်လာသည့် ဓာတ်ပုံတွေမနည်း။ ဒီမှာက ကျွန်းတွေဘက်ကို နေ့ချင်းပြန်ခရီး သွားလို့ရသည်။ သူ့ ကြည့်ရတာ ဒီမနက်မှ ကျွန်းဘက်ကနေ သင်္ဘောနဲ့ အပြေးလာပုံရသည်။ ညက ကျွန်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေနှင့် မီးပုံပွဲ သောက်ခဲ့ စားခဲ့ကြပုံရသည်။ ခုလိုဆောင်းတွင်းဆိုလျှင် ဒီကလူအများစုက အပျော်ခရီးတိုလေးများအနေဖြင့် ကျွန်းတွေ ဘက်ကို သွားလေ့ရှိကြသည်။ ရာသီဥတုက ခပ်အေးအေး ဆောင်းရာသီပြယုဒ် သစ်ပင်ဖူးနုသစ်တို့က နီနီညိုညို တောရိုင်းပန်းလေးများက လမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက် ပွင့်နေတတ်ကြသည်။ ကိုယ်သည်ပင် ထိုကဲ့သို့ ကျွန်းတွေဘက် သွားရလျှင် ဓာတ်ပုံတွေရိုက် လမ်းလျှောက်ရင်း လျှောက်ရင်း ချွေးလေးကစို့လာ ခရီးသွားဖော်ခြင်း အော်ဟစ်နှုတ်ဆက်နှင့် ကြဉ်းကြပ်နေသမျှ လူနေမှုဘ၀ထဲမှ လွတ်မြောက်သွားသလို ခံစားချက်တို့ ပေါ့ပါးလာတတ်သည်။ သို့ပေမယ့် ညအိပ်ညနေထိတော့ ကျွန်းများဘက်တွင် မနေဖူးပေ။ ဒီနှစ်ဆောင်းတွင်းသွားမည် ဟု အားခဲထားသော်လည်း ခုထိ မရောက်သေး။ ရုံးက အစ်မကြီးကတော့ဖြင့် မနေက သွားခဲ့ပေပြီ။ အဲ သူသွားသည်က ကိုယ့်လို အလုပ်ပိတ်ရက်မဟုတ်ပဲ နေမကောင်းဟု ရုံးကိုခွင့်တင်ပြီး ခရီးသွားခဲ့ခြင်းကသာ တစ်မူထူးသည်။ ထားပါလေ နောက် ထပ် feed လေး ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်အုန်းမည်။
ထိုင်ဝမ် လေယာဉ်ပျက်ကျမှုအကြောင်း။ ဘုရား ဘုရား ဒဏ်ရာရသူရ သေဆုံးသည့်သူနှင့် ကျန်ခဲ့မည့်သူတွေ အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။ ခုတစ်လော လေယာဉ်ဘေးဒဏ်တွေ အတော်များလာသည်။ အရင်က လေယာဉ်စီး မကြောက်တတ်သော် ကိုယ်တိုင်ပင် လေယာဉ်ပျံတတ်ချိန်နှင့် ဆင်းချိန်ကြလျှင် ဘုရားစားရွတ်တတ်လာသည်။ အသက်ကြီးလေ သေရမှာပိုကြောက်လေ ဖြစ်နေမိသလား မသိ။ အရင်က ငါသေရင်လို့ မစဉ်းစားမိ။ ခုငါသေရင် ငါသေရင် အဲဒီလိုတွေ အများကြီး စဉ်းစားမိလာသည်။ သို့ပေမယ့် မတတ်နိုင်ပေ ရှောင်လွဲနိုင်စရာမရှိ။ ကိုယ်သည် ပြည်ပမှာ အလုပ်လုပ်နေသည့်လူဖြစ်သည့်အတွက် လေယာဉ်ပျံသည် ကိုယ့်အတွက် အိမ်ကို အရောက် ပြန်ပို့ပေးနိုင် သည့် တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကြောက်နေလျှင်လည်း ဘာမျှ မထူး။ ကံပေါ့လို့သာ တွေးယုံရှိသည်။ ခုလို မျိုး စိတ်မချမ်းသာစရာများကို မဖတ်လိုလှပေ။ စိတ်လေးလေးနှင့် နောက်ထပ် feed တစ်ခုကို ထပ်ဖတ်သည်။
အစ်ကိုတော် ဏီလင်းညို ၏ စတေးတပ်အားတွေ့ရသည်။ အမယ် feeling ဟော့ရှော့ထလုပ် ဆိုပဲ။ စတေး တပ်လေးဖတ်နေရင်း ပြုံးမိပြန်သည်။ မနေ့က “ဘာလဲ အဲတော့ ငါက ထကပြမှာလား” ဟူသည့် အခန်းဆက်ဖြစ်သည်။ အစ်ကိုတော်တင်ထားသည့် ပုံထဲမှ ကောင်လေးအစား ဟိုတစ်လောတုန်းကမှ ဖေ့ဘွတ်တွင်တွေ့ဖူးသည့် photo နှင့် မျက်လုံးထဲ အစားထိုးကြည့်သည်။ ဂျယ်ထောင်ထားသည့်ဆံပင်နှင့် နှုတ်ခတ်မွှေးရေးရေးနှင့် မာဖလာပတ်ကာ ကနေသည့် အစ်ကိုတော်ပုံမြင်ကြည့်မိသည်။ ဟတ်ကနဲ သွားကြီးဖြီးလာသည်။ အဲ..ရုံးကအစ်မကြီးနှင့် မျက်လုံးချင်းဆုံမိသည်။ တစ်ယောက်ထဲ ဟတ်ကနဲ သွားဖြီးပြီးရီမိသည့် ကိုယ့်အားသူသည် သူ့ကို ရီပြသည်အထင်နှင့် ကြောင်တောင်တောင်ပြန်ရီပြသည်။ ဒီတော့မှ ပိုရီချင်သွားမိသည်။ ငါ့နှယ် ကြုံတတ်ပလေတယ်။ ကဲ..ကဲ နောက်ထပ် feed အသစ်လေး ဖတ်လေအုန်းမှ။
7Day News Journal ဂျာနယ်မှ သတင်း။ ယာယီသက်သေခံကတ်ကိုင်ဆောင်သူများကို မဲပေးခွင့်ပြုမှုတုံ့ပြန်ရန် ရခိုင် လူထုသဘောထားရယူမည်ဟု ဆိုသည်။ နိုင်ငံရေးသတင်း ဖတ်ဖြစ်တိုင်း အားမလို အားမရဖြစ်ရသည်။ တစ်ခါတစ်လေ စိုးရိမ်သောကရောက်ရသည်။ တစ်ခါတစ်လေ သြော် ငါတို့မျှော်လင့်နေတဲ့ အနာဂတ် တိုင်းပြည်ကြီး ဘယ်ချိန်များမှ ရပါ့မလဲဟု ညည်းညူမိသည်အထိ စိတ်ဓာတ်တွေကျချင်သည်။ သို့ပေမယ့် ကိုယ်သည် သတင်းဖတ်သူသာ နိုင်ငံ အတွက်တော့ ကိုယ်ဘာမှ လုပ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထိုင်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရုံ ကြည့်ြ့ပီး စိတ်မချမ်းသာရုံသာ တတ်နိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ခါ ဖတ်ဖြစ်သည့် သတင်းတိုင်းကလည်း အမှန်မဟုတ်။ အောက်က comments များကို ပြန်ဖတ်တော့မှ သိရသည်။ ဘယ်နေရာက photo ကြီးကို ဘယ်လို အတုပြုထားပါသည်ဆိုသည့်အကြောင်း။ တစ်ခါ တစ်ခါ မြန်မာနိုင်ငံသားတို့၏ ဆဲဆိုနေသောမှတ်ချက်များလည်း ဖတ်ရသည်။ တစ်ခါတစ်ခါ သာသနာတော်နှင့် မလျော်ကန်သည့် အကြောင်းများလဲပါသည်။ တစ်ခါတစ်လေ သူ့ခြေလှမ်းနှင့်သူ သူ့အရွယ် လှမ်းနေနိုင် သမျှ လှမ်းနေသည့် မိန်းမတစ်ယောက်ကို ခပ်ရိုင်းရိုင်းပြောထားသည့် မှတ်ချက်များလည်းတွေ့ရသည်။ ဘယ်သူအဖွဲ့ ဘယ်ဝါအဖွဲ့ ရောကြိတ်အဖွဲ့ မြင်မြင်ရာဆဲ အဖွဲ့ အစုံ။ ထိုသို့တွေ့ရသောအခါ ကိုယ့်စိတ်ထဲ တို့နိုင်ငံကြီးသည် ချီသာ ချီနေသည် အလံသာလွှင့်နေသည် လေသာတိုက်နေသည် ရှေ့သို့ကားမရောက်ဟု စိတ်ထဲတွေးမ်ိသည်။
ကဲ နောက်တစ်ပုဒ် Myanmar Job DB မှ အလုပ်ခေါ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ရှေ့နေလိုင်စင်ရထားသူဟု ပြောသည်။ ကိုယ်နှင့်တော့မဆိုင်ပေ။ ကိုယ်လည်းဘယ်အချိန် မြန်မပြည်ထဲပြန်ဝင်ပြီး အလုပ်လုပ်ရမည်မသိ။ ရည်မှန်း ချက်တော့ရှိသည်။ ရေခြားမြေခြားမှာ မိသားစုကို ရပ်တည်ဖို့ ကိုယ်မစဉ်းစားမိ။ သေလျှင်တောင်မှ ကိုယ့်အမိမြေတွင် ပင် သေချင်မိသည်။ သို့ပေမယ့် အနာဂတ်သည် မပြတ်သားလှပေ။ ဖြစ်တည်လာသည့်ဘ၀ကို ဖြစ်နိုင်သလို လျှောက် လှမ်းရမည်သာ။ ရွေးလို့ရရင် ရွေးချယ်မည်။ မရခဲ့လျှင် စေညွန်ရာ ကိုယ်သွားလိုက်ရုံသာ။ ပင်ပန်းလား ဆင်းရဲလား မမေးလေနှင့် ကိုယ့်ဘ၀သည် လှိုင်းထန်လေကြီးပြီး ကိုယ်ရုန်းခဲ့ရဖူးပြီ။ အဲဒီအချိန် သေမလား တိုက်မလားဆို ကိုယ်ရွေးခဲ့သည်က တိုက်ခဲ့သည်။ ကိုယ်သည် သေရင်ပြီးတာပဲဟု တစ်ခါမျှ မတွေးဖူးပေ။ တိုက်ရင်းသေလိုလျှင် သေပါစေတော့ဟုသာ ကိုယ်တွေးခဲ့ဖူးသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ့်အတွက်တော့ စိန်ခေါ်မှုတိုင်းသည် တိုက်ရုံသာ. လာမည့်ဘေး ပြေးတွေ့ရုံ။
ဘာတဲ့ မိုးယံမ ၏ woman အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကြီးသွားတွေ့သည်။
စတေးတပ် အောက်ကနေ ရီသလိုလို ပြုံးသလိုလို လှောင်သလိုလို မဲ့ ကာပြုံးနေသည့် ကတုံးသုံးကောင်ပုံတွေ့ရသည်။ အမယ် ဒင်းက.. ဒါမျိုးလဲရသည်။ သူသည် အစုံအဖွဲ့များအား လှည့်ပတ် ဆေးထိုးနေသောသူဖြစ်သည်။ စကားဆန်းများ လည်း အလွန်တတ်သည်။ ကိုယ်နှင့်သူ မရင်းနှီးသော်ငြား သူ့ရေးသည့် စတေးတပ်နှင့် စာတွေတော့ ရင်းနှီးသည်။ တစ် ခါတစ်လေ သူဆေးထိုးထားသမျှသည် ကိုယ်နှင့်သဘောတွေ့လျှင် ကိုယ်သည် like ကိုနှိပ်ခဲ့တတ်သည်။
ကဲ လာလေ့ နောက်ထပ်အသစ်လေး အစ်မကြာဖြူနွယ်၏ လာရောက်လေ့လာ ဂျပန်ဘာသာ page ဖြစ်သည်။ ဒီအစ်မ စာလဲရေးသည် ခရီးတွေလည်းသွားသည်။ မိဘကိုလည်း ပြုစုရသေးသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ စာရေးဖော် မောင်နှမ များကိုလည်း စနောက်နေတတ်သေးသည်။ သူသည်လည်း ကိုယ်နှင့် သိပ်ပြီး ရင်းနှီးလှသည် မဟုတ်။ ကိုယ်သည် သူရေးသမျှ စာတို့အားဖတ်နေသူ တစ်ယောက်သာ။
အစ်မ ချစ်ကြည်အေး၏ ခပ်ဆွေးဆွေးရိုက်ထားသော ပုံလေးအားတွေ့ရသည်။ လှသောသူများမည်သို့နေ နေ လှကြသည် ။ စိတ်ထဲတွင် မှတ်ချက်ပြုမိသည်။ အစ်မစံပယ် ၏ တို့ဖူးသုပ် တင်ထားသည်မှာ နှစ်ရက်သုံးရက်မျှ ရှိပြီ။ ဘယ်နှစ်ခါကြည့်ကြည့် သရေတများများနှင့်စားချင်မိသည်။ ဟော ခုပဲ အစ်မသက်ဝေ ၏ ရောင်စုံကာလ လှလှ Photo လေးများတတ်လာသည်။ စိတ်ကူးကောင်းလွန်းသည့် အစ်မ။ အသစ်စက်စက် နယူးကလိုရီ မည်သော အစ်မနတ်သမီးမှ လည်း သားဓာတ်ပုံတွေရော အမေဓာတ်ပုံတွေရောတင်သည်။ ဓာတ်ပုံရိုက် ၀ါသနာကြီးလွန်းသော အစ်မဖြစ်သည်။
အဲအဲ.. ညနေ ၃နာရီခွဲတော့မှာပါလား. ထမင်းစားပြီးကထဲက ဖေ့ဘွတ်ထဲ ၀င်မွှေနေတာ ..ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်နှင့်ပင် ဖေ့ဘွတ်ကြီးကို နှုတ်ဆက်လိုက်တော့မည်။ ဖေ့ဘွတ်နှင့်တစ်နေ့တာ ဤတွင်ပြီး၏။
ချစ်သောမောင်နှမများ ကျန်းမာလို့ ချမ်းသာကြပါစေရှင်။ လောလောဆယ်ဘာကိုမျ ခံစားချက်နှင့် ရေး လို့မရသော အခြေအနေမှာ ခုလိုမျိုး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနှင့် ဧည့်ခံလိုက်ရပါတယ်ရှင့်။